အင်္ဂလိပ်စကားပြော (Lite) for Android
Rated 4.26/5 (341) — Free Android application by Thein
About အင်္ဂလိပ်စကားပြော (Lite)
ဒီ Say It Right အင်္ဂလိပ် စကားပြော Mobile App ကတော့ မူရင်းစာအုပ်နဲ့ CD မှ အကြောင်းအရာများကို ဘာသာပြန်ဆိုထားပြီး စကားပြောကြပုံများကိုပါ ထည့်သွင်းပေးပါတယ်။ Say It Right စာအုပ်ရဲ့ ပထမတွဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စကား ပြောတတ်လိုသူများအတွက် စကားပြော အသုံးအနှုန်းများကို ရှင်းလင်းချက်များနှင့် တကွ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ အခန်း တစ်ခုရဲ့ နောက်ဆုံးတွင် စကားပြောဆိုကြပုံများကို နားထောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ App ကလေးကနေ အင်္ဂလိပ်စကားပြောကို လေ့လာမှတ်သားပြီး စကားပြောနှင့် နားထောင်မှု စွမ်းရည် တိုးတက်လာနိုင်ပါစေ။
Download and install အင်္ဂလိပ်စကားပြော (Lite) version 2.1 on your Android device!
Android package: com.ebzits.englishspeakingsayitright, download အင်္ဂလိပ်စကားပြော (Lite).apk
Fixed some error for higher android version!
Version update အင်္ဂလိပ်စကားပြော (Lite) was updated to version 2.1 Nov 3, 2017
More downloads အင်္ဂလိပ်စကားပြော (Lite) reached 10 000 - 50 000 downloads Oct 25, 2016
What are users saying about အင်္ဂလိပ်စကားပြော (Lite)
not bad it is good
say is right
the best app for english learners
It is best app I ever see.
3 ခန်းပဲလေ့လာ လို့ရတယ်။ ကျန်တာလေ့လာ ခြင်လျှင် 2000 bill ဖြည့်ပေးရတယ်။ ကိုယ်ပိုင်စာအုပ်သာ အကောင်းဆုံးပါ။
Pretty cool!!! Thanks.
ီ့းလီးမေလိုး ဘာဖတ်ဖတ်၂၀၀၀ လီးတောင်မပေးဘူး ဘားမှလဲမဖတ်ဘူးကိုမေကိုလိုး
D ထက်​မက ​အောင်​မြင်​ပါ​စေ ဗျာ ​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​
Learn Kr. Songs (Lite) — TheinFree App
Basic Korean Speaking ( Lite ) — TheinFree App
Myanmar Law (Lite) — TheinFree App
EPS-ToPIK I — TheinFree App
Fortune4U — Proapps MyanmarFree App